Isigaba se-Caesarea sezinsizakalo zezinsikazi kanye nezindlala
Unayo ingxenye ye-cearean noma cha? Ngokushesha noma kamuva, ekhanda lalo lonke umama osemncane, ngokushesha lo mbuzo uvela. Phela, ngakolunye uhlangothi lwesilinganiso - isimiso, ukubeletha okungenabuhlungu kanye nephesenti encane yezinkinga emva kwabo, kanti nakolunye - lelo qiniso. Ukuzalwa kwemvelo kubaluleke kakhulu ekubunjweni kwengqondo kanye nemvelo yengane.
Emazweni athuthukile aseYurophu, e-East nase-United States, ngisho nanamanje kukhona imfashini yalokho okubizwa ngokuthi "ukuzalwa ngokuvumelana necebo" ngosizo lwesigaba saseKesariya. Ngosuku oluthile, yibaphi abazali abaqoqela ndawonye abanezinkinga zokubeletha kanye nezidakamizwa, bakhuthaza ukuqala komsebenzi noma benza ingxenye ye-cearean.
Yiqiniso, mayelana nomphumela wokukhulelwa kwakho, isinqumo sokukuthatha, futhi nguwe kuphela, kodwa namanje sihlaziye izinzuzo nokuqeda kokubili kokudla kwezifo kanye nokuzalwa kwemvelo.
Mayelana nezinzuzo ze-caesarean section kakade kukhulunywe ngenhla - kulula kunezokubeletha kwemvelo, futhi enkulu kunazo zonke: ngeke uzizwe ubuhlungu bokubeletha. Kodwa kukhona ukuphazamiseka kwengqikithi. Iqiniso liwukuthi lapho ingane ngesikhathi sokubeletha kwemvelo kancane kancane idlula emgodini wokuzalwa, ngakho-ke ilungiselelwe ukuvezwa kwengcindezi yasemkhathini futhi ithole i-lactobacilli yomama. Lezi-lactobacilli zakha isikhawulo esihle kakhulu sokuzivikela ngokumelene nama-microorganisms we-pathogenic.
Esikhathini sesigaba sokudla, ngokuphambene nalokho, ingane isheshe ibhekane nendawo engavamile kuye, kanye nemithi yokubulala umzimba egazini likaMama. Ngenxa yalokho, ngokusho kwezibalo, izingane ezizalwa ngesigaba sokudla cishe zinamathuba amaningi okuba nezinkinga zokuphefumula nezesifo sezinzwa kunabantwana abazalwa ngokwemvelo, izingane ezinjalo cishe ziba nomzimba wegazi. Ososayensi bathi leli qiniso liwukuthi ingxenye yesigcawu iholela ekubambezelekeni ekuthuthukiseni imithi yamathumbu emathumbu, yingakho ukugaya kungaphazanyiswa. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokushintsha okusheshayo kwengane kusuka endaweni ethile kuya komunye, emzimbeni wakhe, ukukhiqizwa kwamahomoni aphethwe ukusimama kwamapulmonary lymph ukugeleza akukwenzeka ngokushesha ngesikhathi sokubeletha kwemvelo. Ngenxa yalesi sizathu, amapheshana okuphefumula ama-crumbs awakwazi ngaso sonke isikhathi ukuqeda amniotic fluid, futhi lokhu kungaholela ezinkingeni ezithathelwanayo.
Kusukela ekubukeni kwengqondo, kunengqondo ekholisayo yokuthi isikhathi sokubeletha sinquma ngezindlela eziningi ukuphila komuntu okuqhubekayo. Iqiniso liwukuthi esigabeni ngasinye senqubo yomsebenzi wezisebenzi ezithile izimfanelo zomuntu siqu zenziwa, isibonelo, njengokukwazi ukunqoba ubunzima, ukubekezela ekufezeni umgomo wakho, ikhono lokulinda nokubekezela, nabanye. Ukungenelela ekuzalweni, kunoma yisiphi isigaba, kungashiya uphawu kulo lonke ukuphila.
Kodwa kunezimo lapho zonke izimpikiswano ngokumelene nesigaba sokudla kufanele zifike ngemuva. Kungenxa yalezi zimo lapho ukuzalwa kwemvelo kungenakwenzeka, ngoba kungalimaza impilo yengane nomama ekubelethweni.
Ukuze uthole iziqondiso eziphelele zezokwelapha zesigaba se-cearean zinjalo.
1. Uma kukhona inqola ye-placenta noma uma i-placenta ivimbela ukuphuma esibelethweni (okungukuthi itholakala ezingeni lomsele womlomo wesibeletho).
2. Uma ingane ingatholakali kahle emgodini wesibeletho. Isibonelo, nge-transverse noma oblique isikhundla se-fetus.
3. Uma i-pelvis encane emitholampilo kanye nenhloko yengane ingavumelani nesifuba somama esithandweni somama. Ungakhathazeki uma uthola ukuthi unalokhu ngesikhathi ukhulelwe, akusikho lutho. Nquma ukuthi konke kuzoba sesiteji sesibili sokubeletha, lapho ukuvulwa komlomo wesibeletho kutholakala khona. Khona-ke odokotela bazobukeka. Ungakwazi yini ukuzala ngokwakho noma kufanele ube nokuhlinzwa.
4. Uma ngesikhathi sokuzalwa kwe-hypoxia enamandla yengane ibhekwa (ngenxa yokuzibopha entanyeni yentambo ye-umbilical, ukuphazamiseka kokusabalalisa kwe-uterine nezinye izimo), kanye nokuqedwa komsebenzi ngokwemvelo, kusekhona isikhathi esiningi kakhulu.
5. Izifo zamehlo ezinzima kumama. Ezimweni ezinjalo, uma i-ophthalmologist ivimbela ngokuyinhloko isikhathi esiqinisiwe, lapho iso lithwala kakhulu, lokhu kuyisibonakaliso esicacile sokwenza lokhu.
6. Imithi ye-varicose ebizwa ngokuthi i-varicose izitho zangasese kumama noma izinhlobo ezimbi ze-toxicosis esedlule.
7. Ukutheleleka ngegciwane lesandulela ngculaza kanye nezifo ezithathelwanayo ngokuzikhukhumeza ngesikhathi sokukhulelwa.
Ukuphuza abesifazane abakhulelwe ngesikhathi sokubeletha
Ukudiliva emva kwesigaba se-cearean
Isimo sowesifazane ngemuva kwesigaba se-cearean
Yini eyingozi kumama wokuzalwa ngaphambi kwesikhathi
Isigaba se-Caesarea: izinkomba nokuphikisana
Ukuhlukanisa kanjani ukuphuma esikhathini sokuphuma kwegazi emva kokubeletha?
Yikuphi ukudla okuhle enhliziyweni?
Imisebenzi kababa osemncane ngaphambi kokukhipha esibhedlela
Ukupheka kwezitshalo zasentwasahlobo ezivela emifino
I-scarlet fever kubantwana: izimpawu, ukwelashwa
Izingoma Zosuku Lothisha ngezingoma nomculo esikoleni. Ukuvuselelwa kwamanje kwamaculo othisha nothisha
Imikhiqizo enempilo kunazo zonke
Intombazane eqenjini lamadoda
10 kwabesifazane abahle kunazo zonke emhlabeni
Ihora lokufunda elithakazelisayo le-Day Cosmonautics - labafundi bama-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amakilasi - Imibono yokugcina ihora lesigaba se-Cosmonautics Day ngesethulo sesigaba 9, 10, 11
UMaria Maksakova esembathweni somshado uzocula eKiev ngenkumbulo kaDenise Voronenko owabulawa
I-Sweatshirt yabesifazane: umdwebo, incazelo, isithombe
Spring yafika: "i-azure" iqoqo lezinhlobonhlobo ze-Pandora ngoMashi 2017
I-Lollipops ekuthambekeni: amahora avela ku-NIKI emgqeni wombala wezimfashini
Isikhumba sesibindi sesibindi nesinkwa sokudla
Izindlela ezinhlanu eziqinisekisiwe zokubhekana nokucindezeleka